Sagantaa Irbaataa ADO Marsaa ADO MN’n Qophaawe | Dhaamsa Ogeettii
(OromoDemocraticFront.org) – Qophiin Galgala Irbaataa ADO Marsaa ADO Minnesotaan gaafa Bitootessa (March) 22, 2014 magaalaa lakkuu (Minneapolis-Saint Paul) keessatti qohaa`e milkiin xumuramee jira. Qophii irbaataa kana irratti kan argaman miseensootaa fi deeggartoota ADO afeeramanii fi dhibbaan lakkaawaman ture. Qophiin kun akka aadaa Oromootti eebba maanguddootaa fi abbootii amantiin baname.
Itti aanusuudhaan wal-gahii kana irratti bakka buutuun Waajjira Senator Minnesota Al Franken jedhamu irraa argamte Aadde Ayianna Kennerly dhaamsaa fi nagaa Waajirra Senaotor Al Franken irra fidde dhiyeesitee jirti. Dhaamsa ishee keessattis Waajjirri isaanii ilmaan Oromoo Minnesotaa keessatti argaman karaa barbaachisaa ta`een tajaajiluuf qophii ta`uu fi qabsoo Oromoo bira akka dhabatan adeessitee jirti. Haasaa ishee booda Vidiyoon Sochii Addi Demokiraatawaa Oromoo erga bu’ureeffamee kaasee waggaa tokko kana keessatti raawwate kan Damee Beeksisii fi Odeessiin qophaa`e dhihaatee agarsiisamee jira. Vidiyoo kana irrattis hojii ADO dameelee torba qabuun;- karaa Jaarmayaa fi Siyaasaa, Diplomaasii, Dinagdee, Beeksisii fi Odeessii, Qunnamtii, Tumsa dhaaboolee mormitootaa, Qorannoo fi Xiinxalaa fi Caayaalee ummata ijaaruun hojjataman cunfuun agarsiisaaf dhihaate.
Itti fufuun sirni simannaan keessummootaa fi hogganootaa ADO; gaafatamaa Birkii ADO USA kan ta’an J/ Amaanoo Duubeen erga raawwateen booda hoggantootni ADO bakka qabatan.
Hogganootni ibsa kennuuf qophii kana irratti argamanis J/ Dr. Diimaa Nagoo, Itti Aanaa Prezidaantii ADO fi J/ Hassan Huseen, Gaafatamaa Damee Qoranoo fi xinxalaa ADO turan. Isaanis ADOn eessaa ka`ee yeroo amma kana wagga tokko keessatti eessa akka gahee jiru gad-fageenyaan ibsan. Keessattuu dhaabni ADO waggaa tokkoo keessatti hojii inni karaa jaarmayaa, siyaasaa fi diplomaasii hojjate ykn hojjechaa jiru, dirqama Korri ADO qabsoo kana biyya keessatti akka maadhessuuf hogganoota ADO’tti kenne akka milkeessaa jiru ykn milkiitti geessaa jiru addeessan.
Ibsa hogganoota kanaa booda gaafii mana keessa ka`ee irratti deebiin qubsaan kennamuun maree bal’aan deeme. Gaafii fi deebii kanatti aansuunis sagantaa gumaacha yaadaa fi qabeenyaa itti fufe. Haala kanaanis sagantaa gumaata maallaqaa yeroo gabaabaaf ta’een mallaqni kumaatamaan lakkawamu bu’uee hojii ADOf galii ta’ee jira.
Sagantaa gumachaa fi yaadaa booda dhaamsa maayyii fi galataa Ittii Aanaa Prezidantii J/ Diimaan dhiyaateen waligahiin irbataa sa`aa 6:00 w.b. jalqabamee halkan keessaa sa`aa 11:30 w.b. milkiin xumuramee jira.
PRESS RELEASE: Ogaden Youth & Student Union (OYSU)-San Diego and The Walk to End Genocide